Bollywood fim, ịbụ ndị obere mkpuru s na ha bụ ndị, nwere ike isi ike ibudata n'elu net. Nke a bụ n'ihi faịlụ ndị nnukwu, na-na-emekarị iche n'ime otutu, n'akụkụ dị iche iche. Nbudata a Bollywood nkiri na gị chọrọ faịlụ ụdị adịghị mfe ma. . Ọtụtụ ndị mmadụ na ga-edozi ihe MKV usoro ma ọ bụ nanị na-ekiri ihe nkiri na iyi. Nke a bụkwa ihe a mere na ụfọdụ ndị ga-kama zụrụ ihe nkiri na kọmpat diski ụdị, n'agbanyeghị na-ekiri ha na a ala àgwà. Zọpụta onwe gị niile na nsogbu, na-enwe nke a ndepụta elu àgwà MP4 Bollywood fim.
Part 1. Top 10 MP4 Bollywood Movies nrụọrụ
Part 2. Top 10 Bollywood Movies Ị nwere ibudata
Part 3. Download Videos Free na Wondershare AllMyTube
Weebụsaịtị njikọ: www.mp4mobilemovies.net/
Company aha: MP4 Mobile Movies
Ọ bụghị ọtụtụ ndị na saịtị na-enye ezi ihe na pụrụ ịtụkwasị obi download njikọ, karịsịa ndị kpọmkwem na ụfọdụ formats. Nke a website bụ ihe megidere ihe ndị mmadụ ga na-akpọ a phishing saịtị. N'agbanyeghị na o nwere ihe ole na ole gbajiri njikọ, onye nchịkwa ga-anọchi dysfunctional ndị pụrụ ịdabere na njikọ n'elu arịrịọ, nyere ụbọchị ole na ole, n'ezie. Ezie na fim dị maka download ibu, na-akwụ ntị na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ghara ịbụ na nke kacha mma mma na okwu nke ndepụta okwu ndị dị otú ahụ. Dị na-echeta na ebe ọ bụ na nke a bụ a free saịtị, ka isi iyi nke ihe nkiri na-eme site na ọrụ, otú ị ga na-atụ anya ihe kasị mma ọ bụla otu oge.
Kasị nyochaa kọwara MP4 Mobile Movies ka dịkọrọ ndụ nkiri saịtị na-enye bụghị nanị igbe ọrụ mp4 Bollywood fim ma a dum na iche iche na collection nke Hindi na fim.
Weebụsaịtị njikọ: www.mp4moviez.in/site_bollywood_movies.html
Company aha: Bollywood Movies Download
Mgbe nbudata fim online, ọtụtụ ndị na-atụ anya nwere jụụ-na-achọ weebụsaịtị na-ọrụ enyi na enyi nakwa dị ka keukwu na fim dị. Little na ha maara na ọdịdị na-arụ ihe fọrọ nke nta na-abụghị akụkụ na-ekpebi pụrụ ịdabere na nbudata free stof. Bollywood Movies Download bụ otu ndị dị otú ahụ na saịtị. Na okwu nke anya, ị ga-eche na saịtị a bụ ihe ọ bụla ma a phishing saịtị, karịsịa ebe ọ bụ na nke a website kpuchie na otutu mgbasa ozi na mmapụta gbasie. Eziokwu ahụ bụ na a na saịtị a họọrọ maka mgbasa ozi na-egosi otú ndị mmadụ n'ezie-abịa ebe a ma nọọ ụfọdụ àgwà oge.
N'agbanyeghị ọdịdị, Bollywood Movies Download bụ n'ezie ihe a pụrụ ịdabere karịrị otu ga-eche. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ anya n'elu arụmọrụ, mgbe ahụ, a na saịtị ghara ịbụ n'ihi na ị.
Weebụsaịtị njikọ: www.clubmp4.com/
Company aha: Club MP4
Club MP4 bụ kpọmkwem ihe aha ya na-atụ aro na ọ ga-; ama na kpọmkwem. Ebe a na saịtị a ị ga-ahụ na, na fim nwere ọtụtụ mfe-achọ. Sara Mbara na uwe a otutu Genres, ị fọrọ nke nta mgbe ina edikpu site abịa ebe a. Nke a bụ n'ihi na nke a website bụ onye ọrụ-eme, na mgbe ị ga-asụ ngọngọ n'elu agbajikwa njikọ ezi mgbe, ị ga-mgbe nile-emesị nweta ihe ị chọrọ. Club MP4 atụmatụ mma ọrụ na ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-aha, ma a ọbịa onye ọrụ nwere ike ka na-enweta ọtụtụ ihe n'aka saịtị a. Dị na-echeta na ebe kasị njikọ na-nyere site ndị ọrụ ndị ọzọ, ị kwesịrị ị na-ego nnweta nke faịlụ tupu ị na-pịa download.
Otu n'ime achịkọta ebe dị iche iche mp4 Bollywood fim, a website awade vidiyo na ọtụtụ ụdị faịlụ ndị ọzọ dị ka nke ọma, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ mp4 faịlụ, mgbe ahụ, nke a bụ unu ebe.
Weebụsaịtị njikọ: www.new3gpmovies.com/bollymp4.php
Company aha: New 3GP Movies pt. Ltd.
Mgbe na-achọ elu àgwà fim, ndị mmadụ na-anya n'ihi na nnukwu-sized .mkv ma ọ bụ .vlc faịlụ, mgbe ezigbo bara uru videos bụ n'ezie nri n'ihu ha noses. N'agbanyeghị unwelcoming aha, New 3GP Movies na-enye ọtụtụ ihe karịrị nanị 3gp videos na ala mma. Juru n'ọnụ ke nta faịlụ extensions, a website cover sa otutu Genres na edemede nke fim, sitere na site Tamil ka Hindi na ọbụna ụfọdụ Asia na fim. Ochichi dịkwa mfe iru, ya mere na bụrụ na ị chọrọ akọ gbajiri njikọ ma ọ bụ spam ị pụrụ mgbe ahụ ha mgbe ọ bụla ị chọrọ.
New 3GP Movies bụ otu n'ime underrated download njikọ na ndị mmadụ na-ileghara anya. Aha ya onwe ya bụ a ihe mere newcomers na-eleghara, ma vetiran ọrụ nwere ike vouch maka pụrụ ịdabere na ya.
Weebụsaịtị njikọ: www.moviesden.in/
Company aha: Movies Den
Dị ka aha ya na-egosi, Movies Den bụ ebe niile ezigbo ihe nkiri na-ebi ndụ. Nbudata nkiri multiple isi mmalite nakwa dị ka a ọnụ ọgụgụ nke nyere nhọrọ dịtụbeghị mma. Ezie na ụfọdụ ndị na-ahọrọ kpọmkwem nbudata, e nwekwara ndị na-anwụrụ na ojiji nke iyi, na nke a website adịghị tụkwasịrị ma nke ụdị. Nke a bụ n'ihi nhọrọ ndị ị na inwe adịghị nanị na-egosipụta oke nke fim, kamakwa ha ọdịiche na ụzọ nke nbudata nakwa dị ka nnwere onwe na-adịghị sonyere na-anọgide na-amaghị aha.
Kasị ndị nlebanye anya nke Movies Den-elekwasị anya na otú dịgasị iche iche na nhọrọ bụ mgbe ọ na-abịa nbudata fim ebe a. Na nkenke, ọrụ na-adịkarịghị ihu.
Weebụsaịtị njikọ: www.moviesmaza.in/
Company aha: Movies Maza Inc.
Ndị mmadụ na-atụ uche si na ịdị mma nke nbudata fim nanị n'ihi na a ụfọdụ website anya-enyo anyị enyo ma ọ bụ jụụ ezu. Ọ bụrụ na ị bụ ndị a na ụdị ndị, mgbe ahụ, gị onwe gị kwa ga-abụ efu si na a otutu. Nke a bụ n'ihi Movies Maza bụ kpọmkwem na. Ikpe ikpe ọ dabere na ya ọdịdị ga-eme ka ị hapụ n'anya ihe dị mkpa n'ezie; nbudata fim si dị iche iche Genres, na ha nwere ha site truckload n'elu ebe a bụ Movies Maza. I kwesịrị mgbe ahụ onwe gị na-achọ ezi na elu-àgwà mp4 Bollywood fim, dị nnọọ akụ aka n'ọnụ ụzọ ha na ị ga-ahụ gị gbara ajụjụ zara.
Movies Maza nwere ike dị ka ọ bụla nkịtị nkiri nbudata na saịtị, ma eziokwu bụ na ọ bụ nke ọtụtụ ndị ọzọ. N'abụ dị ka onye so na-abịa na ùgwù ga-eme ka ị na-eche dị ka a Ukwuu.
Weebụsaịtị njikọ: www.hdmobilemovies.org/
Company aha: Maezenon Inc.
HD Mobile Movies nwere ike ụda dị ka ọzọ spam ma ọ bụ phishing saịtị, ma ọ bụrụ na ị na-ele nso ị ga-ahụ na ị na-ezighị ezi. Ọ bụghị nanị na ihe nkiri sara mbara na iche iche, ndị nlekọta nakwa dị ka ndị òtù enyi na enyi na ihe karịrị njikere inyere gị aka ịchọta ihe ị na-achọ. Ọ dịghị mkpa bụ ihe na fim ị na-ahọrọ; Tamil, Hindi ma ọ bụ ọbụna na-aga aga. Na mbara collection fim ebe a na HD Mobile Movies bụ naanị-eche ka a ebudatara. Ezie na ụfọdụ ndị na-ahọrọ nbudata site nanị saịtị, a website nke nkịtị ga-eme gị obi ụtọ karịrị nrọ.
Ikekwe naanị downside a ịrịba nkiri nbudata saịtị bụ ya nanị otu; i nwere ike na aha ya dị ka onye so na site na òkù site na otu okenye so na.
Weebụsaịtị njikọ: www.mobilesmovie.in/all-bollywood-movies/page-1.html
Company aha: mobiles Movie.org
Nbudata mp4 Bollywood fim dịtụbeghị mma karịa ihe ị ga-enweta site na mobiles Movie. E wezụga na mbara na keukwu ndepụta nke fim ha na-enye, ị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ obere bara nnukwu uru na ụdị nke ochie fim na i nwere ike ịhụ n'ebe ndị ọzọ, ọ gwụla ma ị ka nwere a na-arụ ọrụ VHR ọkpụkpọ. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ n'ime ndị kasị mma Hindi fim niile ugboro dị ugbu a gharazie ịba uru ọbụna diski ụdị. N'ụzọ ọrụ ebube, ha nwere ike ịchọta ebe a na mobiles Movie. Kasị ọdịnaya na-uploaded site ndị ọrụ ndị ọzọ, otú i nwere ike mgbe niile na-agagharị n'ihi na ihe njikọ kwesịrị ndị ị na-ahụ na-adịghị izute gị anya.
Ese na ị ga-ezute gbajiri njikọ mgbe, n'oge oge gị ebe a, ndị ọrụ na-elekọta ezu banyere ya bulite a ọhụrụ njikọ, dị ka ogologo dị ka ị pụrụ inwe ndidi.
Weebụsaịtị njikọ: www.mp4hdmovies.org/
Ọ bụrụ na ị na-amasị-eme nchọgharị-adịghị agwụ agwụ anatara nke Hindi ma ọ bụ Tamil fim mgbe ahụ MP4 HD Movies ebe bụ maka gị. Nnukwu na uwe afọ ọlaedo Bollywood fim, a website bụ a mmasị nke ọtụtụ ruru ka humongous collection fim ha nwere. Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụghị nanị na fim ebe a ka mp4 hụrụ obi ụtọ, ma ndị na-anya maka HD àgwà videos. Bụrụhaala na e nwere fim bụ ndị karịrị enyemaka nke redefining iji melite ogo, ọ bụrụ na ị na-gị anya ezigbo zuru ezu mgbe ahụ ị na-ekwesịghị-emechu ihu.
A oké saịtị maka nbudata mp4 Bollywood fim, a na-agba mbọ website ya kasị mma na-enye naanị videos nke elu àgwà, ma anaghị atụ anya nke ukwuu.
Weebụsaịtị njikọ: www.moviespur.com/
Company aha: Movie SPUR
Movie SPUR bụ ụdị website na ndị mmadụ na-aga bụghị naanị n'ihi na mbara na ọtụtụ collection nke Hindi na Tamil fim, kamakwa izute, kpọkọta ma na-atụle Bollywood fim. Esịnede rabid nkiri Fans, ebe i nwere ike iso na-otu ìgwè nke pụrụ ịdabere na ego ìgwè mmadụ bụ ndị kpọkọta n'ihi mmasị ha nwere Bollywood fim. Gị nbudata nhọrọ nwekwara a mere na-abịa ebe a, ebe ọ bụ na a website awade ma kpọmkwem nbudata nakwa dị ka iyi faịlụ N'ihi na ndị hụrụ seeding faịlụ ọnụ.
Na usoro nke fim na ha nbudata usoro, a website awade a otutu maka nkiri hụrụ ke ofụri ofụri. N'abụ na forums nwekwara ike ịbụ fun.
1. 3 zipụ
A na-abịa nke afọ nkiri banyere enyi atọ na-enwe ná ndụ a dị iche iche n'ọnọdụ, dị ka ha na-achọpụta na ezi nzube nke ndụ. Featuring ndị unbreakable enyi nke atọ ndị enyi na-egosi na ihe ịga nke ọma ndị a mgbe mma, na ọ bụghị ndị ọzọ ụzọ gburugburu.
-Eme ihe nkiri: Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan, Sharman Joshi, Omi Vaidya, Parikshit Sahni na Boman Irani.
1. "Nke a quirky ọma mere film egosi, dị ka utu aha track-ekwu, na n'ozuzu 'ihe niile dị mma' na azụmahịa Hindi sinima." (Rere ure Tomato)
2. "dị mfe ndị kasị mma Indian nkiri na 2009 .... na otu nke kasị mma ebi" (IMDb)
3. "Mee gị na ezinụlọ gị a amara: Watch 3 zipụ. Ọ bụ mmetụta uche, ọ bụ ụtọ, ọ bụ ihe ọmụma." (Bollywood Hungama)
Banyere Bajrangi bụ onye pụrụ iche nwoke bi okporo ndụ ma ka na gbara ya gburugburu na ịdị ukwuu. Na-ekiri otú Salman Khan na-egosi na ime ihe n'eziokwu na ikwesị ntụkwasị obi-emeri emeri niile.
-Eme ihe nkiri: Salman Khan, Harshaali Malhotra, Kareena Kapoor na Nawazuddin Siddiqui
1. "N'ikpeazụ ihe-enye ume ọhụrụ!" (IMDb)
2. "Na elu na-atụ anya gburugburu na fim na ntọhapụ, ọ ejisie ịnapụta na ọtụtụ na-adabere." (Rere ure Tomato)
3. "The film bụ a surefire hit na ka nwetara 'blockbuster' dere niile n'elu ya." (Bollywood Hungama)
The n'onwe nke otú mpụ na omume ọma ga-eduga na a ndụ ịdabere n'ebe ọbọ. Ọ na-ewelite isi ajụjụ nke "Ọ bụrụ na ihe ọjọọ nwere ezi ihe mere iji merie, nwere ike ọ merie na triumpg n'elu ọma na ọgwụgwụ?"
-Eme ihe nkiri: Aamir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachan
1. "A ikpọ egwuregwu na Chaị! Aamir Khan meworo ebube!" (IMDb)
2. "Mgbe Dhoom 3 na-aga na zuru tilt, dị ka ihe autorickshaw chụrụ n'elu corrugated tin obodo ụlọ, ọ bụ ihe na-akpali akpali na-agba ịnyịnya." (Rere ure Tomato)
3. "Lelee: Aamir na AB Jr. on ala-coaster na-agba ịnyịnya" (Bollywood Hungama)
A nkiri banyere otu nwoke si njem site na Mumbai ruo Rameshwaram; Ọ bụ ezie na njem nwere ike ịbụ obere, ma ahụmahụ ndị na-ewuli elu bụ Karịrị Akarị na oké ọnụ ahịa, dị nnọọ iche iche nke ihe ndị ị na-atụghịdị anya mgbe ị na-agaghị na-atụ anya ha.
-Eme ihe nkiri: Shahrukh Khan na Deepika Padukone
1. "Ị ga-enwe ndị ịnyịnya ofụri" (IMDb)
2. "Khan onyinye maka effortlessly-akpụ akpụ n'etiti ntochi na ịhụnanya Mpaghara na-complemented Padukone si pụtara ìhè ịma mma na-atọ ọchị ibe n'ibe." (Rere ure Tomato)
3. "Anọ egwu entities na ịsụgharị n'ime ndị kacha, bụla ghara imeri Nchikota." (Bollywood Hungama)
A satirical sayensị akụkọ ifo nkiri na ugbu n'elu India si blockbuster ndepụta, ọ na-agwa akụkọ nke onye na-terrestrial ọdịmma emetụ n'obi nke nkịtị ikom na ndị inyom, na-egosi na a obi bụ ihe niile ị chọrọ iji mee njikọ, n'agbanyeghị nke iche n'okpuru.
-Eme ihe nkiri: Aamir Khan na aha ọrụ na Anushka Sharma, Sushant Singh Rajput, Boman Irani, Saurabh Shukla, na Sanjay Dutt
1. "The ụzọ kasị mma na-akwụsị a odi af o Watch PK !!! Siri na-achị ọchị na eziokwu" (IMDb)
2. "The film deftly pokes fun na foibles nke earthlings - karịsịa ha agha okpukpe - na ịhụnanya na ọmịiko, na-enwu a ìhè na ahụ na-emegiderịta nke India si nlezianya ma-adịbughị ede ede na-elekọta mmadụ iwu." (Rere ure Tomato)
3. "Otu pụtara ìhè film. Gaa maka ya." (Bollywood Hungama)
6. Baahubali: The Mmalite
Otu The Epic banyere ihe oge ochie warrior oge ochie agha nke akụkọ ihe mere eme otosịrị iru. Dabere na ezi ihe ndị mere eme, nke a nkiri agwa akụkọ nke a furu efu onyeisi adahade ya ruuru ịbụ ocheeze megide niile emegide.
-Eme ihe nkiri: Prabhas, Rana Daggubati, Tamannaah na Anushka Shetty
1. "Nke a na otu onye bụ a Anya ijuanya!" (IMDb)
2. "Ọ bụ ezie na ọ na-adịghị dị ka a maara nke ọma na-Hindi film Fans dị ka ndị ọzọ na famously shirtless kpakpando Salman Khan, Prabhas nwere ọnụnọ Ukwu iji transcend asụsụ." (Rere ure Tomato)
3. "akpa nke a abụọ akụkụ usoro na-ekwe nkwa na-a saga nke ga-kasị maa gbadaa emere n'ubọchi nke akụkọ ihe mere eme." (Bollywood Hungama)
7. Obi ụtọ na New Year
A controversial akụkọ banyere otu ìgwè nke do-gooders na a Heist. The akụkọ ebute a ike ìgwè ndị con ikom na ndị inyom ha na njem na nke chọrọ ọbọ.
-Eme ihe nkiri: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Abhishek Bachchan, Boman Irani, Sonu Sood, Vivaan Shah na Jackie Shroff
1. "Nke a nkiri na-egosi na ihe niile dị njọ na Indian sinima" (IMDb)
2. "Karịa nnọọ a inu nke fizzy fun, a 3-hour ntochi bụ Jeroboam-sized." (Rere ure Tomato)
3. "All niile, obi ụtọ na afọ ọhụrụ bụ maa a imebisi kụrụ film" (Bollywood Hungama)
Ihe emereme nkiri featuring a ike-sie uwe ojii na ụzọ ya ikpe ziri ezi. Achọ a 'igba' si ahụmahụ ya ná ndụ, Devi bụ a daredevil onye ga mgbe iduga a jụụ na-agwụ ike ndụ.
-Eme ihe nkiri: Salman Khan, Jacqueline Fernandez na Randeep Hooda na-eduzi ọrụ na Nawazuddin Siddiqui
1. "Jikere maka a Mbufịt akpọ igba na tiketi window." (Bollywood Hungama)
2. "Bad otu" (IMDb)
3. "A kpakpando nwere ike ebuli a nkiri dị ka" Kick, "na-eme ya silliness magburu. Nke ahụ anaghị eme eme n'ebe a." (Rere ure Tomato)
Sequel ka India si kụrụ dike nkiri, featuring a ọhụrụ villain. Nke a na oge Krrish osobo ụkwụ ụkwụ na Kaal, a oruru ọjọ amamihe na telekinetic ike na a siri ike uche na-ewetara ogbaaghara ka ụwa.
-Eme ihe nkiri: Hrithik Roshan, Vivek Oberoi, Priyanka Chopra, na Kangna Ranaut
1. "Bollywood !!! Ị mkpa a oké njọ gagharịa gị na-na Action / Sci-Ụgha Ngosi ....." (IMDb)
2. "The-enweghị isi na, square na maa mma Bollywood dike foto Krrish 3 jikoro elu mara nke ọma, ọ bụrụhaala na unu na-echeta na ọ bụ ndị ọzọ nke a ụmụaka 'nkiri karịa ya US ogbo" (rere ure Tomato)
3. "Ọ bụ a Diwali bonanza maka moviegoers gafee n'ụwa" (Bollywood Hungama)
Ihe emereme thriller si Fox Studios nke bụ ihe ukara remake nke 'Knight na Day'. A goro ohi aka na mba udo nkwekorita dara n'ihi nwaanyị onye mechara ke ofụri ọgbaghara.
-Eme ihe nkiri: Hrithik Roshan na Katrina Kaif
1. "Dhoom + Ek tha Agu = Bang Bang" (IMDb)
2. "Hrithik Roshan bụ nkwenye dị ka a na-ghar mba ọla ohi - ma a slack Katrina Kaif lends obere ka obodo" (rere ure Tomato)
3. "na-ewu ewu starcast nke film ga-hụ na ihe nkiri ákwà ifufe site comfortably na igbe-ụlọ ọrụ." (Bollywood Hungama)
> Resource> MP4> MP4 Bollywood Movies, Top 10 Sites ka Download